नायिका पूजा शर्माले दीईन् पत्रकार सुवेदीविरुद्ध उजुरी – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/नायिका पूजा शर्माले दीईन् पत्रकार सुवेदीविरुद्ध उजुरी
नायिका पूजा शर्माले पत्रकार प्रकाश सुवेदीविरुद्ध उजुरी दिएकी छन् । पत्रकार सुवेदीले आफूविरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाउँदै नायिका पूजाले आइतबार चलचित्र कलाकार संघमा उजुरी दिएकी हुन् ।
पत्रकार सुवेदीले नायिका पूजाविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिमा अपशब्द र होच्चाउने शब्द प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला कलाकार संघमा उजुरी परेको हो ।
नायिका पूजाको शारीरिक एवं बौद्धिकतामाथि टिप्पणी गर्दै पत्रकार प्रकाशले भनेका थिए, ‘आफैँ नजान्ने अनि हामीले चाहिँ लिएको इन्टर्भ्यू काटिदिनु पर्ने ? मिलाई मिलाई महानायिका बनाइदिनु पर्ने ? त्यो पनि दाह्रा निस्किएको अनुहारलाई ?’
गायक प्रकाश सपुतकाे मर्मस्पर्शी गीत ‘बदला बरिलै’ सार्वजनिक भएकाे छ । सुमधुर स्वरकी धनी गायिका देवी घर्तीको आवाज रहेकाे उक्त गीतमा प्रकाशकै शब्द तथा संगीत रहेको छ । यो गीतले समाजमा बढ्दो ब ला त्कारको घटनावि रुद्ध बोलेको छ । नायिका केकी अधिकारीले भिडियोमा सशक्त ढङगले प्रस्तुत गरेकी छिन्, जसमा ध्रुव कोइरालाको नेगिटिभ अभिनय रहेको छ । यतिबेला सो भिडियो यूट्यूवका ट्रेण्डिङको पहिलो स्थानमा छ ।
६ दिनको अवधिमा भिडियोलाई २२ लाख बढी पटक हेरिएको छ भने आएका १३ हजार ५ सय बढी प्रतिक्रियामा धेरैले मुक्तकण्ठले तारिफ गरेका छन् । भिडियोलाई १ लाख ३१ हजार बढीले लाईक गर्दा ३१ सयले दिसलाईक गरेका छन् । भिडियोमा हिउवाला गौतम, अर्जुन आचार्य, भद्र कुँवर, सन्ध्या गौतम बराल लगायतको पनि अभिनय देख्न सकिन्छ । अनिल कृष्ण मानन्धरको छायांकन रहेको भिडियोमा प्रविन भट्टको सम्पादन रहेको छ । गायक सपुतले नै निर्देशन गरेको सो भिडियो निकै नै उत्कृष्ट बनेको छ ।
यतिबेला तीजकाे अवसरमा चेलीबेटीले भोग्नु परेकाे गीतलाइ मर्मस्पर्शी ढङ्गले कथाबस्तुलाइ बाँधेर भनाइएकाे भिडियोले नेपाली साँगेतिक बजारमा मात्रै नभएर सोसल मिडियामा समेत यस्तो छाप पारेकाे छ कि सामाजिक सञ्जाल यूट्यूवमा त ट्रण्डिङ एकमै आइसकेकाे छ । यस्तो बेला पनि सर्जकद्वय प्रकाश सपुत र केकी अधिकरी त्यति खुशी देखिएका छैनन् । कारण यहि हाे, कि यो गीत वा भिडियोमा समावेश कथा बस्तु एउटा नेपाली चेलीले भोग्नु परेकाे एकदमै द’र्द’नाक परिस्थिति छ ।